Ahoana ny fomba fiasan'i Sorare, ny baolina kitra fanta-daza eran'izao tontolo izao izay mandeha amin'ny Ethereum - Cazoo
Home » Home » Ahoana ny fomba fiasan'i Sorare, ny baolina kitra fanta-daza eran'izao tontolo izao izay mandeha amin'ny Ethereum
tenifototra: Isa manodidina, NFT, Fambara tsy azo avela, Sorare, Karatra valisoa, Karatra tsy fahita firy Sorare, Sorare karatra tsy fahita firy, Sorare Cards tsy manam-paharoa
Fotoana famakiana: 6 minuti
Sorare dia lalao baolina kitra nofinofy izay mandeha Ethereum. Te-hanoratra andalana vitsivitsy aho hahafantarana ny fiasan'ny Sorare, ary heveriko fa misy torolàlana kely hivoaka avy ao hanangana ny ekipanao ary hanomboka.
Raha sambany ianao mamaky ireto andalana ireto dia tongava tsara.
Eto, ato amin'ireto pejy ireto, mizara ny eritreritra an'ity tontolo crypto ity amin'ny Cazoo aho. Raha tianao ny atiny ary mianatra zavatra amin'ny famakiana ahy ianao dia faly aho. Fizarana dia miahy! Ary raha mieritreritra ny hisoratra anarana amin'ny Sorare ianao dia ataovy amin'ny fanarahana ity rohy ity: sorare.com. Ary eny, rohy referral io. Fa matokia ahy, hanana tombony lehibe ianao - ho hitantsika eo izany.
Tsy te-hisoratra anarana amin'ny kaody? Mandehana any amin'ny google ary mitady iray ihany!
Sorare dia lalao baolina kitra nofinofy miorina amin'ny blockchain
Mametraka ny kaontinao
Fahita amin'ny karatra Sorare
Fa maninona aho no tokony hanana karatra virtoaly Sorare?
Ahoana no fomba hamoronako ny ekipako ao Sorare?
Inona ny ligin'ny Rookie?
Ahoana no anaovana ny ekipa?
Rahoviana no lalaovina amin'ny Sorare?
Ahoana ny fanisana ny isa?
Ahoana ny fikajiana ny Score an'ny mpilalao?
Inona avy ireo loka amin'ny lalao ligy isan-kerinandro?
Ahoana ny fiasan'ny Sorare? Sorare manararaotra ny lazan'ny karatra filalaovana baolina kitra mahazatra, toy ny hoe stiker paniniana Panini izy ireo, ary lalao ligy fanta-daza, ahafahan'ny mpilalao mifanakalo karatra amin'izy ireo, mandray anjara amin'ny fifaninanana ary mahazo loka. Izy rehetra dia mampiasa NFT, mari-pamantarana tsy azo ihodivirana na zavatra azo angonina nomerika.
Lalao baolina kitra fanta-daza izay mihazakazaka eo amin'ny blockchain Ethereum ary mampiasa NFT, famantarana tsy fahita firy, noho izany misy valiny mitombo.
Ny hevi-baovao nataon'i Sorare, ilay maodelim-pandraharahana tsy manam-paharoa, dia nahazo ny fanohanan'ny orinasa lehibe toa an'i ConenSys, Ubisoft ary Opta, ary koa ny jiro maitso, ary ny fandraisana anjara amin'ny indostrian'ny baolina kitra manerantany. Ny kintana Barcelona Gerard Piqué dia mpampiasa vola ao amin'ilay orinasa, ary maro amin'ireo klioban'ny baolina kitra malaza eran-tany no voatanisa amin'ny lalao amin'ny fomba ofisialy.
Ity torolàlana ity dia manazava ny fomba fananganana ekipa, fifanakalozana fandresena ary fandresena amin'i Sorare, mandritra ny fotoana ahazoana tombony amin'ny tambajotra misokatra sy madiodrano.
Mora ny mamorona kaonty amin'ny Sorare.
Mifandray amin'ny ity adiresy ity, ary tsy maintsy manome adiresy mailaka, tenimiafina ary solonanarana (izay no anaranao mpitantana), na azonao atao ny miditra amin'ny kaonty Google na Facebook efa misy (ilay malaza fidirana ara-tsosialy). Maninona no mampiasa kaody referral: satria hahazo karatra tsy fahita ianao! Tsy homena anao eo noho eo izany fa rehefa avy naka mpilalao 5 avy eny amin'ny Marketplace ianao.
Azonao atao ny mangataka karatra fiarahamonina XNUMX maimaim-poana raha vao miditra ianao.
Ny Sorare Card dia singa mpanangona nomerika manana alàlana ofisialy avy amin'ny mpilalao baolina kitra ho an'ny vanim-potoana manokana amin'ny baolina kitra.
Misaotra ny teknolojia blockchain fa ny mpankafy rehetra dia afaka manangona ny mpilalao tiany indrindra amin'ny tombony azo avy amin'ny tsy fahampian'ny azo porofoina (famatsiana raikitra). Ankoatr'izay, ny Sorare Cards dia azo ovaina ary azo ampiasaina amin'ny tontolon'ny fampiharana sy lalao samihafa: nilaza izahay fa nanambady ilay tetikasa i Ubisoft, sa tsy izany? Tsy izany ihany fa namorona fifaninanana sy ligy manokana azony idirana amin'ny Sorare Cards koa izy. OneShotLeague. Ny fanangonana tsirairay dia mankafy ny toetran'ny fananana hita ao anaty blockchain: tsy azo adika na angalarina izy io. Ankafizin'ny mpampiasa ihany koa ny fahazoana ny tantara nomerika feno amin'ny karatra. Ho an'ny vanim-potoana 2020-21, misy ambaratonga telo ny tsy fahampiana isaky ny Sorare Card: Unique, Super Raro (10 kopia) ary Raro (100 kopia).
Ny haavon'ny fahita karatra telo an'ny Sorare
Torohevitra pro sasany hanombanana ny fananana karatra Sorare:
Ny faniriana azo angonina: ny karatra tsirairay avy dia hanana ambaratonga faniriana tsy manam-paharoa ary, vokatr'izany, lanja ho an'ny olona samihafa (mpilalao misolo tena, laharana laharana, zom-pirenena, klioba ...)
Ny sandany amin'ny lalao: Ankoatry ny fiheverana azo amboarina sy ny sandan'ny intrinsikan'ny karatra tsirairay, dia azo ampiasaina hilalao. Sorare dia mamela anao hampiasa azy ireo amin'ny lalao baolina kitra fanta-daza antsoina hoe SO5 izay ahafahanao mahazo loka isan-kerinandro.
Ny lanjan'ireo lalao fahatelo: ny fahitana farany dia manana sanda amin'ny lalao maro kokoa ny Sorare Cards, tsy amin'ny SO5 Sorare ihany. Ireo mpamorona Sorare dia mieritreritra tontolo iray nanorenan'ireo mpanonta lalao hafa traikefa vaovao izay mampiasa Sorare Cards ihany koa (jereo Ubisoft, jereo etsy ambony).
Rehefa misoratra anarana amin'ny Sorare ianao amin'ny voalohany dia hahazo ny fonosana karatra mahazatra (ka tsy Rare, Super Rare na Unique), rehefa vitanao ny dingana tsirairay amin'ny fizotrany tsotra sy mivantana.
Ny karatra fiarahamonina maimaim-poana azonao dia mamela anao hijery ny lalao ary hiditra amina ekipa iray ao Ligy Rookie, ny League of Beginners: ligy natokana ho an'ny mpitantana vaovao izy io.
Ny ligin'ny Beginners League dia manome valisoa ireo mpitantana miaraka amin'ny valisoa azon'ny mpilalao Common sy Rare. Ny ligin'ny Beginners dia mamela ny mpitantana vaovao hifaninana mandritra ny 8 herinandro, ary ho afaka handray anjara amin'io ligy io ianao, na amin'ny fiofanana, in-8 fotsiny, aorian'izay dia ho afaka handray anjara amin'ny firafitry ny fizarana rezionaly sy manerantany. .
Aorian'ny lalao 8 herinandro dia hiala amin'ny Newcomer Manager ho New Manager ianao - amin'ity fe-potoana ity dia mety nandresy vitsivitsy ianao Karatra Loka Sorare. Azonao atao koa ny manakodia ny tananao ary mandeha mividy mpilalao vaovao, karatra vaovao, ao anatiny Market Market, ny tsena famindrana.
Ny fidirana amin'ny ligy Rookie dia mitovy amin'ny fidirana amin'ny ekipa iray ao amin'ny Ligy.
Ny ekipa iray dia misy slot 5 ary ny 5 rehetra dia tsy maintsy fenoina.
Slot hamenoana hiditra amin'ny ligy Sorare
1 Mpiandry harato
Defender 1 farafaharatsiny
Midfielder 1 farafaharatsiny
Mpanafika 1 farafaharatsiny
Tsy azonao ampiasaina indroa ilay mpilalao!
Raha manana karatra tsy fahita firy amin'ny ekipanao ianao dia azonao atao ny manome anarana azy kapitenin'ny ekipa, ary hahazo bonus fanampiny. Ny karatra rehetra dia azo fidiana ho kapitenin, afa-tsy ny karatry ny vondrom-piarahamonina.
Vantany vao voafidy ny mpilalao dia voavonjy ho azy ny ekipanao ary apetraka amin'ny ligy sy fizarana voafantina!
Mandraisa anjara amin'ny fifaninanana baolina kitra SO5 Fantasy isan-kerinandro ary mahazoa fanangonana sarobidy • Sorare
Satria i Sorare dia lalao baolina kitra nofinofy, misy ny lalao baolina kitra voatondro amin'ny tena fiainana ny fifaninanana. Fifaninanana roa no atao isan-kerinandro:
Manomboka amin'ny zoma 17.00 UTC ka hatramin'ny talata 04.00 UTC
Manomboka amin'ny talata 17.00 UTC ka hatramin'ny zoma 04.00 UTC
Azonao atao ny mahita ny fampahalalana rehetra mandritra ny herinandro vitsivitsy amin'ny lalao ao amin'ny Arena filalaovana na indray mandeha nisoratra anarana, rehefa tsindrio ny bokotra Play.
Ny isa fantina dia isaina aorian'ny dingana telo:
ny Score an'ny mpilalao (HP) amin'ny fampiasana ny matrix scère, izany hoe ireo isa amin'ny zava-bitan'ny mpilalao eo ambony kianja.
ny Karatra isa (CS) mampiasa bonus tsirairay amin'ny karatra (Season, Captain ary Level Bonus)
ny Score ekipa (TS). Ity dia ampaham-bola fotsiny amin'ny isa 5 anao.
Ny Score an'ny mpilalao dia mikajiana amin'ny fahombiazan'ny mpilalao mandritra ny lalao iray.
Ny isa azon'ny mpilalao amin'ny Sorare dia eo anelanelan'ny 0 ka hatramin'ny 100. Ao amin'ny pejin'ny mpilalao iray no ahitanao ny Score an'ny mpilalao mandritra ny lalao 5 farany. Raha mahita famantarana ianao DNP, midika ho an'ny "Did Not Play", amin'izay ny mpilalao dia nahazo ny Score an'ny mpilalao 0.
Ny isa azon'ny mpilalao dia isaina toy izao:
Isa azon'ny mpilalao = Isa marim-pototra + isa ankapobeny (manodidina rehetra), - raha ratsy ny isa manodidina, dia miampy 0.
Il isa voafaritra dia miorina amin'ny statistika izay misy fiatraikany mivantana amin'ny valin'ny lalao toy ny tanjona, fanampiana, karatra mena sns ...
Theisa manodidina raisina avokoa ny antontan'isa rehetra mandritra ny lalao iray, izay tsy dia miharihary loatra ny manara-dia noho ireo nampiasaina hikajiana ny isa nanapahana, fa tena ilaina amin'ny fanombanana ny fiantraikan'ny mpilalao amin'ny lalao mandritra ny lalao iray.
Ny isa totalina dia mihidy amin'ny 0 ary voafetra ho 100.
Ny isa manodidina dia miankina amin'ny fihetsika kely sy matetika kokoa amin'ny lalao iray. Betsaka ny - 39 raha ampidiro ny fihetsiky ny mpiambina rehetra - ary amin'ny Sorare dia azonao atao mijery ny latabatra iray manontolo.
Raha manana lalao roa ny Karatrao amin'ny herinandro lalao ho avy dia ny voalohany ihany no ho voavaha. Tsy hahita afa-tsy ny lalao voamarika ao amin'ny lisitry ny lalao ataon'ny mpilalao amin'ity herinandro filalaovana ity ianao.
VOA-POSITIVE HEVITRA NEGATIF
gol Tanjona manokana
Ampio Karatra mena
Sazy manohana Sazy manohitra
Mitahiry eo amin'ny tsipika Fahadisoana izay lasa tanjona ho an'ny mpanohitra
Tsy misy tamba-jotra nalaina (mpiandry harato ihany) Manaiky tanjona 3 na mihoatra (mpiandry harato fotsiny)
Voavonjy ny sazy
Fanavotana ilay mpiaro farany
Ohatra iray amin'ny fiantraikan'ny fisehoan-javatra sasany mandritra ny lalao amin'ny isa manodidina ny Sorare
Ny miavaka amin'ny naoty Sorare dia tsy mijanona eo, fa tsy izy ireo no lohahevitr'ity taratasiko ity.
Ny ekipa Sorare dia manambara ny valisoa (karatra ETH +) isaky ny herinandro filalaovana sy fizarana tsirairay ao amin'ny fizarana Play amin'ny tranokala, eo ambanin'ny lohateny Loka fanomezana.
Ny foto-kevitra Sorare dia mamirapiratra, raha ny hevitro. Ny mety hananana ireo karatra ireo ary koa hampiasana azy ireo amin'ny tontolo hafa sy lalao hafa dia manokatra tontolon'ny fahafaha-manao zavatra. Tsy lalao fotsiny izy io, fa toerana ho an'ny mpanangom-bokatra ihany koa.
Ny zava-misy fa mifamatotra amin'ny tamba-jotra Ethereum ary ny sakana dia mety mametra ny fampahafantarana azy amin'ny mpampiasa. Fa ho avy izy ireo, ho tonga….
Ny ekipa ao ambadik'i Sorare dia toa mahay sy manam-pahalalana, ary mpampindram-bola roa lehibe no natoky azy ireo: Benchmark sy Accel. Tsy diso matetika ireo roa ireo.
Misy ny drafitra hanitarana ny lampihazo, mahita ny lalana lavitra feno fanavaozana ny tondrozotra. Ao amin'ny tontolo vaovao isika ka tsy marina akory ny manantena rafitra tonga lafatra sy tsy misy olana: azoko antoka fa hitombo miaraka amin'ny sehatra ihany koa ny ekipa.
Raha fintinina, efa nisoratra anarana ho any Sorare ianao? Malalaka iè!
Lahatsoratra manarakaSorare dia miditra amin'ny ekipa iray hafa, ilay Boca Juniors goavambe 🇦🇷
Sorare dia miditra amin'ny ekipa iray hafa, ilay Boca Juniors goavambe 🇦🇷